सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ? – Nepal Press
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन हुँदै, को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
२०७८ जेठ १४ गते १७:३३
कैलाली । एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट मन्त्री थपिने भएका छन् । सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शुक्रबार एमालेको तर्फबाट केहि मन्त्री थपिने सम्भावना बढेको छ ।
एमालेकै तर्फबाट दीर्घ सोडारी पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।
एमालेबाटै चुनकुमारी चौधरी र कुलवीर चौधरीलाई पनि राज्यमन्त्री बनाउने सम्भावना छ ।
एमाले भित्र विवाद बढे पनि माओवादीमा भने विवाद नरहेको पाइएको छ। अहिले माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्री र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । एमालेसँग अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि अहिले एमालेले पाएको छ ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ १४ गते १७:३३